Independent Movie Theaters muBrooklyn
Zvichida uri muropa kune Netflix kana mazana multiplexes pamwe nekupakisa, asi kana iwe uri bhidhiyo yefirimu chaiyo, unofunga kuti imwe nyaya yakasununguka yemavhidhiyo yemafirimu inowanikwa. Cinephiles ichafara muBrooklyn, ine mafirimu akawanda anoyevedza ari munharaunda, ichiratidza zvinhu zvose kubva shure kwekudzokera shure kusvika kune mafirimu matsva akazvimiririra uye kunze kwenyika. Tora rwendo rwe cinematic rweBrooklyn pane idzi dzinodiwa kuBrooklyn mahara.
Iyi Bushwick theater, yakavhurwa munaJanuary 2015, uye inoshumira Duck Confit Nachos, Heritage Porchetta uye yakakwana Dark uye Stormy apo kuongororwa kwemazuva ekupedzisira. Iyi vhiki yevhiki ndeyekuzarura uye inosanganisira mazuva maviri John Carpenter kupemberera zuva. Kana wakashaya kuona Pulp Fiction pachirongwa chikuru, tora muwonesi gare gare mwedzi uno paChinyorwa. Purogiramu yemitambo yemavhidhiyo ichakumbira vose vanofarira mafirimu. Kana iwe wakamboda kudya pane chimwe chinhu chakakosha kupfuura chetapret soft or poply buttered popcorn kana kuti uchida kuderedza zvimwe zvipfeko paunotarisa zvidzidzo, iyi ndiyo nzvimbo yako. Anowedzera pamwe, Kana iyo firimu inotyisa, unogona kungoita zvimwe zvinwiwa.
Nitehawk Cinema ndi "New York's original cinema eatery; Imba yepaIndaneti yakasununguka ichiunza nzira yakasarudzwa yefirimu, zvokudya, uye zvinwiwa. "Muna 2011, iyi Williamsburg theatre yakashandura bhazikopo reBrooklyn, nekuzarura nzvimbo yemitambo umo iwe unogona kudya nekumwa uchiona mafirimu matsva uye retro.
Nitehawk inoshandisawo mapurogiramu ezvimwe zvirongwa zvinosanganisira Little Bookworms, uko vana vanogona kunakidzwa nezvikoro zvakadai seFantom Toll Booth uye Wizard yeOz . Kana iwe usina mwana-funga, funga kuenda kune imwe yepakati peusiku kuongororwa, mafirimu anouya anosanganisira Fargo , Matambudziko , uye Labyrinth , makore makumi masere ekutanga achitarisa David Bowie.
BAMcinematek ibasa guru, kuongorora mafirimu ekare, mafirimu matsva, nekugadzira zviitiko zvezviitiko zvakasangana nefirimu kusanganisira kutaura nevanomira mafirimu. The Fort Greene movie theater inofanirwa-inoshanyira mafirimu ose. Kana iwe une vana vaduku, cinema ino ine mutambo unozivikanwa wegore rose wefirimu, apo vana vanogona kuvhota firimu yakanakisisa. Vanewo vhiki yevhiki vese vane ushamwari hwemaminee emafirimu ekare. Bamcinematek inoratidzawo mafirimu anhasi
Munyika yakazadzwa ne multiplexes, iyi indie yeWilliamsburg yemitambo inoshandiswa zvakakwana nevazvipiri ndeyekutsvaga kwakanyatsozorodza. Vanonyanya kufunga nezvekuratidzira kakawanda kusakanganwa uye kutadza mafirimu. Chengetedza purogiramu yavo yezvinyorwa zvakanyatsorongeka purogiramu yemavhidhiyo. Uye zvinongova zvishanu chete kutarisa firimu.
Kunyange zvazvo ivo vachimhanya kumhanya-famba, ino itsva yeWilliamsburg inzvimbo ine pfuma yega uye inzvimbo yakanaka yekuona firimu idzva. Iko huru yemitambo ine nhandare yepakati yekugara uye iri mumoyo weWilliamsburg. Mushure mefirimu, inwa uye udye mune dzakawanda mabhairi uye mitsuwa yezvikamu mune chikamu ichi chinokurudzira cheBrooklyn. Vekugara vanocherechedza kuti mafirimu anotengesa nokukurumidza pane iyi inotarisirwa mafirimu, saka endai kumangwanani kana kutenga matikiti mberi.
Top Queens Attractions uye Zvikwangwani
Kuenda kuBrooklyn Kubva JFK Airport
Tarisa kunze Jack Jack 99 Store muNYC
Inonyanya Kuwedzerwa Doro uye Inwa muNew York City
Kupemberera Zuva Idzva Idzva MuChite Square
Iyo Yakanakisisa Yakakura Mazai muQueens
June Festivals uye Zviitiko muTexas
Mazano ekuwana paNyaya yeVatariri paLC Clubs
10 Zvinhu Zvausingagoni Kuunza Muzvivara Zvitanhatu Pakati Pakati
Haunted Queen Mary - Chokwadi kana Nhema?
Tungamira kuUffizi Gallery muFlorence
Kuvimbika Kwako Kutonga kwe 2016
Ndirini Ndinofanira Kuvandudza Pasipoti Yangu?
Native Maitiro eAmerica kuNative Trails muStottsdale
Southeast Asia Top Budget Airlines
Nei Vatasvi Vadzoka Kuenda neRyanair?
Yakanakisisa Yakasanganiswa Yogurt Zvokudya muDenver
Teatro: Mumwe weDenver's Most Romantic Hotels
How To Travel from Goa to Mumbai by Train